Ososayensi baxwayisa ngokushisa okungathandeki e-Arctic | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Arctic yisifunda esisengozini enkulu ekushintsheni kwesimo sezulu. Ososayensi badidekile yizimo ezikulethayo. Futhi akuyona into engaphansi: izinga lokushisa ligcinwa ngamanani angaphezu kokujwayelekile, okwenza iqhwa lincibilike.
Ngokwesifundo esishicilelwe kuThe Washington Post, Kwezinye izindawo ze-Arctic, amazinga okushisa angakhuphuka ngaphezu kwama-degree angama-50 ngaphezu kwesilinganiso esijwayelekile.
1 I-arctic iyancibilika
2 Nciphisa inani lezinsuku ezibandayo
Isithombe - Weather Weather
Isimo sezulu sase-Arctic saziwa ngokushintshashintsha ngokweqile, kepha ukukhuphuka kwezinga lokushisa okwenzekayo kukhulu kakhulu futhi kuhlala isikhathi eside kangangokuba ososayensi badidekile. Njengoba ukwazi ukubona esithombeni, kwezinye izindawo izinga lokushisa ngenyanga kaJanuwari lahlala lingu-11ºC ngaphezu kokujwayelekile, kuthatha u-1981-2010 njengesikhathi sokubhekisela.
Umqondisi weNational Snow and Ice Data Center edolobheni laseBoulder, eColorado, ubhale kulo magazini Emhlabeni Okulandelayo:
Ngemuva kokufunda i-Arctic nesimo sezulu sayo amashumi amathathu nesigamu, ngithathe isinqumo sokuthi okwenzeke ngonyaka odlule kudlulele ngokweqile.
Nciphisa inani lezinsuku ezibandayo
Isithombe - uNico Sun
Inani lezinsuku ezineqhwa liphansi kakhulu kunanoma isiphi esinye isikhathi. Isazi sezulu kanye nomlobi u-Eric Holthaus uqale ngokufaka igrafu kuTwitter, ephawula ukuthi kukhombisa ukwehla okukhulu kwenani lezinsuku zokumisa kwamanzi. Futhi lokhu kuyinto eyenzekayo manje.
Ngabe siya kokungaziwa? Umphakathi wezesayensi uyakuqinisekisa lokhu. Khonamanjalo, kwenziwa izifundo zokuthola ukuthi yini esiphikisana nayo. Okwamanje, kulo nyaka ucezu lweqhwa e-Arctic luncane kunokuba kufanele, ngakho-ke uma luqhubeka kanjena, bekungeke kube neqhwa elisele ehlobo eNorth Pole.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ososayensi baxwayisa ngokushisa okungathandeki e-Arctic
Ukuguquka kwesimo sezulu kuzokwandisa ukufa kwabantu emazingeni okushisa aphezulu eCatalonia